Maxaa ka khaldamay Dimoqraadiyaynta Puntland? - Horseed Media
Ogolaansha codbixinta IDP’s ka (dadka ku soo barakacay Puntland ee ka yimid gobollada kale ee dalka). Waxaa dad badan aaminsan yihiin in ula jeedada awoodsiinta IDP’s inay codeeyaan aysan ahayn mid sinaan iyo cadaalad bulsho aan looga gonlahaa, balse ujeedku ahaa oo qudha in dadkaasi loo adeegsado doorashada, sida meelo badan ka dhacdayna (dhaqankii Cali Yare) ayaa la adeegsaday ee ahaa gawaari ku soo daabul, u qaybi lacag biyo cabaal, kadibna u adeegso inay xisbigaaga u codeeyaan. Waxaa taa ka sii daran, in maalmihii doorashooyinku socdeen ay soo baxday dhaqdhaqaaq dad oo ka dhex socday magaalooyinka, tusaale ahaan, maalintii doorashada ay dhacday, waxaa reer Garoowe ku kaftameen in magaaladii ay ku soo hareen “reer Garoowihii asalka ahaa”, taasoo ay ka wadaan in dad badan oo Garoowe ku nool ay Eyl iyo tuulooyinka ku xeeran u aadeen codbixin doorasho. Ufayn iyo tuulooyinka ku teedsan laftigeeda dad badan oo Qardho ka tagay ayaa kasoo cod bixiyay. Kolkaa waxaa su’aalo ka iman karaan habka lagu xakamayn karo inaan qof aan ku noolayn, lahayd aqoonsi deegaan loona cayimid goob cod bixin uusan dhiiban Karin cod. Iyo in aan IDP’s loo adeegsan doorasho ku shubasho ah.
maadaama nidaamkii qabali ahaa uu fashilmay, kaasoo ah mid hadimo ku ah jiritaanka iyo midnimada Puntland, ayna jiraan weli shaqsiyaad (qaarkood dowlada ku dhex jiraan) kuwaasoo halis u arka hirgelinta nidaamka xisbiyada badan iyo doorasho qof iyo cod, sidee lagu xaqiijin karaa inaysan masuuliyiintaas, mulkiilayaasha dowladda iyo hagbad sugayaashu fashilin nidaamkaan curdinka ah?
maadaama deegaamo badan oo gobolka Sool ka mid ah aysan gacanta Puntland ku jirin, sidee dadka deegaamadaasi ku heli doonaan cidii matali lahayd, doorasho noocee ahse ayaa loo qoondeeyay?
Maadaama Madaxweyne Deni uu yahay masuulka howshaan fulinteeda balan qaaday, uuna iminka Xamar u xirxiran yahay, side lagu xaqiijin karaa inaan nimaadkaani burburin hadii uu Madaxweyne Deli Xamar u shiraacdo?
Maadaa ashqaasta xisbiyada furtay aanay ahay dad aqoon sidaa u buuran u leh howshaan ay faraha la galeen, sidoo kale aysan ahayn dad mabaadi, ahdaaf iyo barnaamijyo ay ka duulayaan isku bahaystay balse ku xulafoobay dano siyaasadeed ama shaqsi iyo hebel iska dhicin, taasoo jiritaanta xisbiyadooda ka dhigaya kuwo aan cago badan ku taagnayn, sidee lagu xaqiijin karaa in la helo xisbiyo ay u dhamaystiran yihiin dhamaan arimihii xisbi siyaasadeed laga rabay si ay u noqdaan kuwo la isku hayan karo laguna soo hiran karo?
ugu danbayn, waxaa dowlada looga fadhiyaa inay jawaab ka bixiso doodii iyo dacwadii Gudoomiye Guuleed, xaqiijisana in guddiga Doorashadu noqdo mid madax banaan awoodna u leh fulinta iyo xaqiijinta nidaamkaan isaga ah.